ZoomNotes, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Averinay indray ilay taratasy mba hampisehoana aminao fampiharana iray hafa izay afaka alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra. Amin'ity indray mitoraka ity dia miresaka momba ny ZoomNotes izahay, fampiharana mety indrindra ho an'ireo mpampiasa rehetra mila manana fanamarihana ary mila fampiharana raha hanao izany. Miaraka amin'ny ZoomNotes isika dia afaka manoratra amin'ny tanana na amin'ny staody amin'ny pad izay atolotry ny fampiharana antsika, amin'ny rakitra PDF, amin'ny sary na antontan-taratasy, na Microsoft Word, Microsoft Excel na PowerPoint, mivantana na amin'ny alàlan'ny Google Drive. ZoomNotes dia manana vidiny mahazatra 7,99 euro ao amin'ny App Store, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Karazan-penina Ballpoint. Misy karazany 7 ny marika azo isafidianana, ao anatin'izany ny gel, nib, pensilihazo ary ny watercolor. Misafidiana amin'ny lanjan'ny tsipika tsy voafetra.
Fiarovana amin'ny felatanana. Apetraho eo amin'ny efijery ny tananao raha manoratra ianao.
Varavarankely fanamafisana. Manorata amin'ny fomba fijery mihalehibe, raha mbola hitanao fa mihena ny fijery. Amin'ny alàlan'ny fandrosoana mandeha ho azy, na havia na havanana na havanana amin'ny soratanana fanozonana havia.
Pejy kely Io fampiasa miavaka io dia ahafahanao mampiasa pejy 'ao anaty pejy. Io dia mamela ny fampiasana naoty miraikitra ary mamela ny famoronana fisian-tsary hierarchical. Azonao atao koa ny mampiditra rakitra PDF iray manontolo ho toy ny pejy kely, na manafatra pejy avy amin'ny antontan-taratasy ZoomNotes hafa amin'ny takelaka iray.
Markers. Ny tsoratadidy dia ahafahanao mitahiry ny fomba hijerena ireo antontan-taratasinao ary hiverina aminy any aoriana any.
Zoom tsy voafetra. Zomà miditra sy mivoaka tsy misy fetra an-tsitrapo ao anatin'izany ny fomba fijery mihodina.
IMPORT, MANORATRA AMIN'NY FILES PDF. Manafatra ary manorata amin'ny rakitra PDF, rakitra Microsoft Office Word, Excel ary PowerPoint (amin'ny alàlan'ny GoogleDrive).
ANJARA SY TOROHEVITRA PAPER tsy voafetra. Ataovy kely na lehibe araka izay itiavanao azy ny pejinao. Misafidiana karazana taratasy misy karazana taratasy azo ovaina.
COLORS tsy voafetra. Loko 65 tapitrisa no azo ampiasaina amin'ny penina sy lahatsoratra. Voafehy miaraka amin'ny 'Color Manager' vaovao izahay.
Azo ovaina tanteraka miaraka amin'ny tsipika fitarihana. Ao amin'ny ZoomNotes, azonao atao ny misafidy, mandanjalanja, manodina ary mamadika ireo zavatra (fitaratra). Misy ihany koa ny fanapahana, fandikana ary apetaka, ao anatin'izany ny antontan-taratasy, pejy ary rindranasa hafa.
Bika aman'endrika. Bika sy zana-tsipika mahazatra (tsara ho an'ny sarintany an-tsary), saingy azo sintomina amin'ny alàlan'ny polygon-tanana na fitaovana marokoroko ary avadika ho endrika endrika geometrika tena izy.
Tranomboky Symbol. Trano famakiam-boky feno endrika azo ovaina sy azo ampiasaina.
Sary sy fanovana sary. Ampidiro ao anaty antontan-taratasinao ireo sary (sary) na amin'ny habe na amin'ny refy. Mampiasà fitaovana fanovana sary hanoratanao, saron-tava, hamerenana ny laoniny, hanitsiana scan ary warp. Ampidiro ao anaty tranomboky fakantsary na sary ny sary sy horonan-tsary.
Lahatsoratra voasoratra. Ampidiro ny lahatsoratra nasiam-panoratana amin'ny alàlan'ny kitendry (ao anatin'izany ny kitendry Bluetooth), miaraka amina endritsoratra sy haben'ny endri-tsoratra, loko font, famenoana ary sisintany.
Fandraisana feo sy famerenana amin'ny laoniny. Anisan'izany ny fanafarana sy fanondranana rakitra fisie. Azonao atao koa ny manisy firaketana feo ao amin'ilay pejy tondroiny.
DOKUMENTA ASA. Mizarà antontan-taratasy toy ny rakitra PDF, sary, horonan-tsary, na antontan-taratasy ZoomNotes (amin'ny alàlan'ny mailaka, iTunes, clipboard, Dropbox, Facebook, Twitter, ary Evernote.
Mampiasà ho an'ny PRESENTATIONS. ZoomNotes dia mifanaraka amin'ny VGA hampiasaina amin'ny projectors, monitor ary AirPlay.
Tohanan'ny STYLUS elektrika. Manohana ny script Pogo, Hex3 JaJa ary Adonit Jot Touch ary ny Jot. Wacom Fineline sy Intuos 1 & 2. Lynktec Apex sy DotPen
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » ZoomNotes, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra